ည့္ရေချက်တင် - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
အထီးလိင်၊နည္းပညာချစ်သူများဖြစ်ကြပါပြီနာမည်ကြီးကရှေးခေတ်ကကတည်းက။ အလယ်၌ပြီးခဲ့သည့်ရာစု၊ခပ်သိမ်းသောလျောက်ပတ်သောမက်မက်ကောင်လေးဆိုရင်၊သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး၊ထို့နောက်မှာအနည်းဆုံးတစ်ဦးအေးမြ။ လောလောဆယ်၊အပျင်းရှာဝယ်ယူမှအသစ်ဖြန့်ချိပစ္စည်းသို့မဟုတ်အသစ်အစီအစဉ်များအတွက်။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေသဘာဝဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ဪ:ဟန်နှင့်အတူအားလုံးမိမိတို့ဆန္ဒအစစ်အမှန်၊အမြင်၊ကာမဂုဏ်ဘက်၏ဘဝအသက်တာ၊ဖြောင့်အမျိုးသားများကိုအလွယ်တကူအမြစ်အင်တာနက်အပေါ်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာသာလူအများကြီး ဖ်ာ္ေျဖေရး၊ဒါပေမယ့်လည်းအခွင့်အတွေ့ဆုံရန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အဖွဲ့ဝင်များ။ အလေ့အကျင့်ကြောင်းပြသမကတစ်ခုတည်းလူကိုလူအပင်မတော်တဆ။ ဖြတ်ချုပ်၊သင်မည်မဟုတ်သူနှင့်အတူသူအသိအမှတ်ပြုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမှလာမယ့်။ ဘာအကြောင်းပြောသောအချက်ကိုအကောင်မွချက်တင်ချက်ချင်းခံစားရတဲ့အချိန်မှာစတင်အသုံးပြုဖို့ဘို့က၎င်း၏ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့အချိန်းတွေ့။ အများအပြားမိန်းကလေးငယ်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ဒီ straightforwardness။ သူတို့အဖို့ကိုချစ်မယ်လို့၊ဒါပေမယ့်မလိုချင်ကြဘူးတွေအများကြီးရဒုက္ခမှလွှမ်းမိုးသွင်ပရိသတ်တွေဘယ်သူလက်ထရောနစ်၊banal ချီးမွမ်းနှင့်အမွှေးအ insinuations ပတ်သက်။ ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်အတူယောက်ျားတွေလည်းအားလုံးအထက်ပါပြဿနာများအဖြစ်၊သင်ရှိသည်ရန်မချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူရဲ့အိမ်သွယ်သတင်းအချက်သို့မဟုတ်သင့်အသွင်။။။။။ တကယ်တော့၊ဆိုက်တစ်ခုရှိသည်မပါဘူးမှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဤရိုးရိုးလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်၊ဒါကြောင့်လည်းအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သလိုတန်ဖိုး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူယောက်ျားတွေအခြေခံပြီးသင့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်၏နည်းလမ်းရွေးချယ်ခြင်း interlocutors မှ လူအရေအတွက်သူအွန်လိုင်းနှင့်အဘို့ရှာကြသည်အခွင့်အလမ်းဆက်သွယ်ဖို့။ သင်လိုအပ်သမျှအကြောင်းကိုသိရန်ပွင့်လင်းဘို့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ chatroul ကဘာခလုတ်မှနှိပ်နေစဉ်အပေါ်ကွင်း။ ပထမဦးဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်။ အတွက်ရှာ interlocutor စတင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအ၊အညီအမျှအရေးကြီးခလုတ်နှိပ်နောက်တစ်ခု။ ဤသည်လိုအပ်ဘယ်မှာကိစ္စများတွင်၊သင်ကမကြိုက်ဘူးအ Interlocutor အချို့သောအကြောင်းပြချက်များ။ နောက်ဆုံးနဲ့တတိယခလုတ်နှိပ်ရပ်တန့်။ ဤသည်အတန်ငယ်အလားတူဒုတိယအဆိုးအသံုးျပဳသူမ်ားတီးေ၊ဒါပေမယ့်လျှင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါက၊ကိုရှာပြီးစီးခြင်းနှင့်အခြေခံအားဖြင့်မဟုတ်လိမ့်မည်စတင်ရန်သည်အထိသင်ပြန်မှသွား။ ယခုသင်နားလည်တဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေဖြစ်ပါသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်။ သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်၊သင်သည်ဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အပေါ်၊ကဲ့သို့မည်သည့်အခြားအင်တာနက်အရင်းအမြစ်၊အပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်းဖုန်း၊သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် C အခမဲ့။ကောင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဝဘ်ရွကင္မရာမွာပြေး။ အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူတဲ့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူ။ မနှင့်ထံမှပျော်ရွှင်မှုရရန်လူတစ်ဦး၏အိပ်မက်များ၏။Chatrouletteအပိုင်းအတွက်အာရုံရှေးခယျြနိုငျနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးကမည်သည့်တိုင်းပြည်။ ဒါကြောင့်၊မိန်းကလေးများ၊သင်ကြိုက်လျှင်ပြင်သစ်ပါဘူး၊ထို့နောက်သင်နှိုင်းယှဉ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေမှ။ သူဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံ။ ၂၄ အနေနဲ့ ၁၈ ပေါင်း Chatroulette တူပါဘူး။ ကျနော်တို့ဆိုဒီမှာဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနည်းဆုံး ၇၀%ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏အမျိုးသားအသက် ၃၀ အောက်တွေ။ ပြီးမှကျေးဇူးတင်စကားကိုအင်္ဂါရပ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ။ ဒီအသက်အရွယ်၏အျဖောင်းပွ၊အဆိုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်သင်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိအပေါ်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်။ သူတို့သည်ကောင်းစွာသိရှိကြ၏၊နှင့်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကုဒ် ၂၄ စေဖို့အလုပ်လုပ်အားလုံးထုတ်ကုန်များပေါ်:စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ၊လက်တော့ပ်၊တက်ဘလက်များ၊စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူလည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်။.
ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄+၇ ဝန်ဆောင်မှုအဆက်မပြတ်စစ်ဆေးနေအသင်ထိတ်လန်ဗီဒီယိုများနှင့်ထိုးစစ်ချက်တင်။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်လွယ်ကူပြီးသာယာသောဆက်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးကမ်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်း Interlocutor။ မှအိပ်မက်များ၏အစည်းအဝေးသင်ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများ၊သင်အတော်လေးတွေအများကြီးအတွက်ဘုံ-ကွန်ပျူတာအင်တာနက်နှင့်အတူတစ်ကမ်။ ကျွန်တော်သာအသက်ရှင်ချက်တင်အပေါ်။။။။။ ဒီအကြာကအသစ်၊အဆင့်မြင့်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်စကားပြောဆိုမှု၊မျှတလွဲဖယ်၊က္ထားသို့မဟုတ်ဗျ။ ဒါဟာသင်၏နှစ်ဦးကိုတစ်ကမ်။ အစည်းအဝေးတွင်ဗီဒီယိုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုအဆင်ပြေ၊အထူးသဖြင့်ခေတ်အခါအများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသုံးစွဲနေကြတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊နှင့်အတူဖြတ်သန်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သဘောပေါက်။ ကျွန်တော်တို့မှာအရေအတွက်၏ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောနှင့်ပျော်စရာစတစ်ကာများ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့တခါတလေကိုယ့်ပို့စတစ္ကာမ်ားကိုပြောထက်ပိုအပိုဒ်တစ်ခုလုံး၏။ ၏ပရိသတ်များအဘို့အကောင်းဟောငျးဖုံဖုံ၊ကျနော်တို့တစ်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်လူကြိုက်အများဆုံးစိတ်ခံစားမှု။ စကားပြောတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့များအတွက်ပုံမှန်၊လူပေါင်းကောင်းသော၊ဒါပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်တစ်ခုတည်းရှိသည်သောသူလူတစ်ခုခုပြောဖို့အသီးအသီးအခြား။ ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများအတွက်ပေးဆောင်ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အပျော်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုသိကျွမ်းရ။ သာရှိပါတယ်အချို့အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များအတွက်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေး။
ကျွန်တော်တို့ဆွဲစတစ်ကာများအားလုံးအခါသမယ။ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်၊အမျက်ဒေါသ၊စိတ်ချမ်းသာ၊မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့တစ်မူထူးခြားသောကြောင်များအတွက်ရောင်စဉ်တစ်ခုလုံး၏။ အမြန်သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအတွက်ရယ်စရာနည်းလမ်းနှင့်အလေ့အကျင့်အရောင်။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာပေါ်တစ်ဦးကမ်၊ရုံသင်တို့ကဲ့သို့ပြုနှင့်အတူသူစိမ်း ကျပန်းတွေ့ခြင်းစနစ်နှင့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မိတ်ဆွေများက။ သို့သော်ငြားလည်း၊မလို interlocutors လျစ်လျူရှုနိုင်၊ဒါကြောင့်ထံမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။ ဒီနေရာတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အွန်လိုင်းပင်လယ်ပြင်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်။ ရွေးချယ်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သူသည်လူများအဘို့အွန်လိုင်းအများစုသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏။ ကစားတဲ့-ချက်တင်ကမ္ဘာအဝှမ်းချိတ်ဆက်ကြမ္မာနှင့်စဉ်းစားသည်အလွယ်ကူဆုံး၊အမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းအဖို့ခင်မင်သိကျွမ်းရ။ နေ့တိုင်း၊ထက်ပိုပြီး ၁၀၀ အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများလုပ်ဆောင်။ သူတို့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတစ်ဦးသာယာသောအသက်ရှင်သောချက်တင်။ သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံအားလုံးထုတ်ဝေအပေါ်တိုက်ရိုက်လေကြောင်း၏အရှင်။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်စိတ်ဓါတ်များအတွက်များအတွက်၊သင်ကြည့်ရှုသင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယို။ အချို့တို့သည်အလုံးဝအခမဲ့။ အစာကျွေးသည်အဆက်မပြတ်ရေးသားတော့မပျင်းရ။
ဒီမှာအကောင်းဆုံး ဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူၡမ်ားယောက်ျားတွေအများသူအမျိုးသားများအားကစားကိုချစ်မြတ်သွင်လိင်အတွက်ဆှဗီဒီယိုချက်တင်ပဲ။ ဒီနေရာမှာသင်ရှိသည်နိုင်အခမဲ့ဆှဝွက္စြာဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူချောမောလေးယောက်ျား၊အဖြစ်များစွာသောအခြားအခမဲ့ဆှလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မှန်ကန်စာကြောင်းဆှ၊Striptease၊လိင်နှင့်လိင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆှလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်ဘဲ။ အကြိုက်ဆုံးဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်ပျော်မွေ့မမေ့နိုင်သောသွင်လိင်အွန်လိုင်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ရဲရင့်တက်ကြွနှင့်အရသာရှိပါတယ်၊မင်္ဂလာရှိနှစ်ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့အဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဆှဗီဒီယိုစကားပြောနိုင်နှင့်တွေ့ဆုံအလွန်အဆင်းလှသောနှင့်ကြွက်သားအားကောင်းလိင်၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားသောသူယောက်ျားတွေကယ့်ကိုအတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့် eroticism။ အကောင်းဆုံးကောင်လေးတွေဟာပျော်ရွှင်သွားသင်ကမ္ဘာ၌အချစ်အလိုဆန္ဒနှင့်။ ထူးခြားတဲ့နှင့်ချစ်ခင်သောအထီးတတ်နိုင်သမျှသင်ညှို့၏မယုံပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ့်ဗီဒီယိုချက်တင်၊အဖြစ်လာနိုင်ပါသည်အထူးလူတစ်ဦး၏အိပ်မက်များ၏အသည်းအသန်စကားလက်ဆုံအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အတူသာ။ မှုနှင့်သင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးကမ်။ အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအတွက်စကားပြောနိုင်ဦးကြိုပြုခြင်း-လိင်၊ကျောင်းသားများ၊ဂင္း၊ဖျော်ဖြေရေးနဲ့အခြားသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆှဗီဒီယိုချက်တင်အားလုံးပါဝင်၏မတူကွဲပြားမှုကိုအထီးလိင်ကမ္ဘာပေါ်လာပြီးနောင်တမရကြဘူး။ ခရီးအမျိုးအစားဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ၊သင်နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်အားလုံးသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။ ပူပြင်းတဲ့အထီး Striptease-ကြိုးစားမှလွှတ်ပေးရေးကိုအလေးတစ်ဦးတည်းနှင့်အတူအလိုရှိသောအကြံအစည်အတွက်အမှန်တကယ် idyll။ အခမဲ့နှင့်စျေးနှုန်းသက်သာသောဝန်ဆောင်မှု၏အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်အမျိုးသားများအပေါ်ဂြိုဟ်သည်စောင့်ဆိုင်းသင်တို့အဘို့အခပ်သိမ်းသောမိနစ်များ၏ရှေ့မှောက်၌မှန်ဘီလူး၏အဘျ။ ခံစားတစ်ဦးကဖော်ရွေလေထု၊အညှို့ၡမ်ားျပာပါတယ္။ အံ့သြဖွယ်စွန့်စားစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ပေါ်သင်တို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရင်းအမြစ်များနှင့်ပေါက်တဲ့နေရာ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်အလွယ်တကူတည်ထောင်သောသဘောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်သာယာသောအားလပ်ရက်၊အားလပ်၊ သန့်နှင့်အများကြီးပို။ အမှန်တကယ်သဘောအကျွမ်းနှင့်အတူတစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ချစ်စရာကောင်းအဖော်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသည်သယံဇာတအရင်းအမြစ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဤအမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များဖို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းအလှဆင်၏အထီးကျန်နှင့်အပေါ်ထားရန်အမှန်တကယ်ပြသ။ ဒီနေရာမှာအမျိုးအစားအတွက်ဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ၊အွန်လိုင်းတင်ဆက်ထူးခြားသောဆှလွှမ်းမိုးသောမေတ္တာကယောက်ျားတွေပြသသင်အွန်လိုင်း။ လည်း၊အများအတွက်ကိလေသာနှင့်လူကြိုက်အရသာရှိသောအမည်မှာသေချာပါသည်မှအယူခံ။ လောကသို့ငုပ်အဒိတ်၊စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏အသက်တာမှတပ်မက်နှင့်အလိုဆန္ဒ၊ငုပ်သို့ပြန်၏ကမ္ဘာ့အအိပ်မက်ကိုဖြစ်လိမ့်မည်စဉ်ဆက်မပြတ်စူးစမ်းလေ့လာဖို့၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂျီနှင့်သင်၏အံ့သြဖွယ်စိတ်ကူး။
ငါအားနည်းချက်:ကျွန်တော်တန်ဖိုး၏ထိုအချိန်ကသူ၏အသက်တာ၊ဒါကြောင့်ငါကြိုးစားရှိသည်ဖို့ကောင်းတဲ့နှင့်ဖော်ရွေလူများသင်တို့ပတ်လည်။ မင်္ဂလာပါ။ အထူးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောလူမျိုးနေပယ်ကနေအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးနောက်၊အရာသာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ၊သင်သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလူအတွက်အခြားမြို့။ စိတ်ဝင်စားသောသူမည်သူမဆိုအတွက်အစည်းအဝေး၊မေတ္တာကိုရှာဖွေခြင်း၊ပတ္မွာသူတို့ရဲ့အခြားဝက်၊လက်ထပ်သို့မဟုတ်လက်ထပ်ပြီးရတဲ့၏မြို့အတွက်ကျဉ်းမြောင်း၊ပျော်စရာချိန်းတွေ့။
အဓိကအကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့်လူတွေကမသိဘူး-သငျသညျနေဖို့အတွက်အရိပ်-ကြပါဘူးဟန်-ချွတ်၊ချွတ်ပြသသင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့အလှအပနေရာမှာအခုတော့-သင့်ရဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ။ မိန်းကလေး၊ယောက်ျားလေးများ၊အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအားလုံးလေ့လာမှုမှာ။ ကျနော်တို့အထူးဖန်တီးနေတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုကဒီမှာ။ ဆက်သွယ်ရေးသည်အလွန်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အ၊ဒါကြောင့်အပြုံးတစ်ခုနှင့်အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ၊နမ်းသောအခါနှင့်မိသားစုလုံး၊အားလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ဂၢမ်ားထ၊ဒီနေရာမှာလူတိုင်းဖို့အစပြုရအကျွမ်းနှင့်အတူရိုးရှင်းပြီးသဘောမှာ-မင်္ဂလာပါ၊သင်အမြဲလိုအပ်မှရယူရန်ထွက်ရပ်၊နှင့်အတူစတင်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအချိန်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုတွေ့သူရစာန်၊သူဆက်သွယ်ပြောဆိုတွေအများကြီးနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောသား။ အရေးအပါဆုံးအရာ:မရှက်ခြင်း၊မမိန်းကလေးများမဟုတ်သလိုယောက်ျားလေးရေးလိုက်ဟေ့၊ဤလုပ်နေ။ အနည်းဆုံး။ ပြီးတော့အားလုံးရ။ ကျွန်တော်တို့ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအဆင့်။ အစဉ်အမြဲ။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူတွေ့လိမ့်မည်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊သငျသညျကိုမှန်ကန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေ။ အသို တစ်ဦးကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့အလွယ်နှင့်အတူပြီး-ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကြိုက်များအတွက်-သင်ဖို့သေချာအောင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ချက်တင်၊ဓါတ္ပံု၊ၾကာ္ျငာမ်ား-ရေးသားဖို့အခမဲ့ခံစားရဖို့အသီးအသီးအခြားနှင့်ပျော်ရွှင်မှုယူမည်မဟုတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းရန်။
ချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်မိန်းကလေးများအတွက် Makassar အင်တာနက်ကနေတဆင့်အတူ၊များစွာသောအခြားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၊ရှည်လျားပြီးအစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သင်ကြားနိုင်သည်တွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်တွေဘယ်လိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင်ကူညီပေးရှာတဲ့အလုပ်။ တစ်ဖက်၊ပင်အနာဂတ်အတွက်ဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု၊သို့သော်ဤတစ်ကွဲပြားခြားနားသောပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းခဲ့သည်ထက်ပို ၅၈၊ဘယ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အဖော်လိုက်ဖက်ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် Makassar အိမ်ထောင်ဖက်သင်ကူညီလိမ့်မည်ဖန်တီးတကယ့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအများဆုံးအမြတ်အစွန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပြသလိုက်ဖက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဆက်အသွယ်၊နှင့်အားဖြင့်ယူသင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက် Makassar အသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်အပေါင်းတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်များမှာ။ ခက်တွေ့ဖို့တစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်ပြောသမျှကိုသင်ချင်တယ်အထူးသဖြင့်လျှင်၊လူတွေကအဆက်မပြတ်တောင်းဆိုနေတာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ။ ဒါေပမယ့္မင့္ကေ။။။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့၊ထိုအခါအထီးကျန်သင့်ဝန်။ ကျနော်တို့တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သည်။ ဆက်ဆံရာတွင်များ၏ပြဿနာနှင့်အထီးကျန်အတွက်ခေတ်မီလူနေမှုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်ထက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမီ၊သို့သော်၊အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ကဆန့်ကျင်ဘက်မှန်ပေ၏၊ ခက်ခဲ။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏အဘိုးအဘွားများနှင့်ပင်မိဘများရှေ့တွင်ရပ်နေ၏တီဗီကိုစောင့်ကြည့်တနေ့လုံး။ သူတို့ပါတီအစည်းအဝေး၊ခရီးမှထိုအရပ်မှ။ ရှိများစွာသောအခွင့်အလမ်းမှဖြည့်ဆည်းသင့်ရဲ့အိပ်မက်။ လက်ရှိမျိုးဆက်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီအာရုံထဲမှာ။ နေထိုင်သူအများစုကမြင့်အဆောက်အအုံနှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်းကိုမမြင်စဖူး။ ရှိပါတယ်ဘယ်နေရာသွား၊အဘယ်သူမျှမသင့်လျော်သောလျှောက်ထား။ သင်ချင်တယ်၊ပြောဖို့သွား။မစိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီ။ဆိုရင်အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ဆူညံ၊ဒါကြောင့်လည်းအရမ်းမရှာတွေ့မှတတ်နိုင်သမျှသင်သည်သင်၏ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်။ ဒါပေမယ့်အနေနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်။ သူအစွမ်းထက်သည်နှင့်ကြီးတွေ၊အသိတွေအများကြီးလျှင်မအရာအားလုံးကို။ တွင်နီးပါးအနည်းငယ်မိနစ်၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် Makassar ကြောင်းအခမဲ့အဘို့။ မိနစ်အနည်းငယ်ယူပြီးသင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူတစ်အများအပြားစံမ်ားပေါ်သည်ထင်ရှား။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရေးသားခဲ့သည်၊ငါအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ၊တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဂိုး-အိမ်ထောင်၊သားသမီး၊တစ်စုံတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုတူလူဘုံအကျိုးစီးပွား၊ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့ ဖျော်ဖြေရေးရွေးချယ်စရာ။ အပြားအတွက်စစ်တမ်းများ၊ဤသူတစ်ဦးဖြစ်လိုမယ်လို့အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သူရှာဖွေရေးအသက်အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်သဏ္ဌာန်၊မျက်နှာဆံပင်အရောင်၊ပုံ၊နှင့်အခြားပါရာမီတာ။ တွေအများကြီးဖတ်စံမ်ား၊ခွဲခြားသတ်မှတ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတစ်ဦးသင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အစာပေးစာယူ။ အချို့လူများကတူရှည်လျားစာပေးစာ။ ထို့ကြောင့်လူတစ်ဦးဖြစ်လာနီးကပ်ခင်လာမည့်အစည်းအဝေး။ သူမ်ားေနေ့စွဲအပေါ်သွားသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ တစ်စုံတစ်ဦးကမှတဆင့်သွားကြဖို့အလယ်အလတ်အဆင့်ကနေသွင်ပေးမှအမှန်တကယ်ပြန်လည်ဆုံဆည်း-ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းဖြင့်။ မ fantasize ကမြင်စွာရှာဖွေသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်ကိုအသုံးပြုချိန်းတွေ့။ နေရာတိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်သာ Makassar၊အပါအဝင်အများအပြားလိမ်လည်။ ဒါဟာမှန်ပါတယ်ကြောင်းပြောရန်သင်ထက်ပိုပေါ်ရှိအခြားသောဆိုဒ်များ။ သို့သော်၊ဤတစ်အကြောင်းပြချက်စွန့်ခွာဖို့ဒီစိတ်ကူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးညီတဲ့လူ။ သင်ကံကောင်းနေလျှင်၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အချစ်တဦးတည်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်များအတွက်သင့်ရဲ့အထောက်အပံ့နှင့်အကူအညီအတွက်အရာအားလုံး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကောင်း။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမကြာခဏဖြစ်ပျက်။ဟုတ်ကဲ့။. တစ်အများအပြားယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့ကြပြီအချစ်မှာ။ သင်နေထိုင်နေခဲ့ကြနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွအပြုစုပျိုးထောင်။။။။။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မကြာခဏ၊အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊တစ်ဦးအချစ်တဦးတည်း။ ဒီမပါဘဲအတွေ့အကြုံနှင့်ကျရှုံး။ ဒါပေမယ့်သင်ရှာတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးတည်းသာ၊သင်ချက်ချင်းနားလည်အရာအားလုံးအချည်းနှီးမဟုတ်ခဲ့။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အလွန်အရေး၊ယခုဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအဘို့အတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။.
။ဒီနေရာမှာနှင့်ယခုအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအပေါ်စုံတွဲရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဂျပ်။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ၊မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ထည့်ပါ။ ဤအဖြစ်အယောက်၏မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊သင်ကူညီလိမ့်မည်အသစ်ဖြစ်စေအသိအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ Polova-အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ဘယ်မှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာအခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေအတွက်ဂျပ်နှင့်ချက်တင်၊အွန်လိုင်းဓါတ်ပုံများနှင့်နိုင်ဖုန်းဆက်ဖို့သင်ဖုန်းပေါ်မှာ။ ထိုအယူ၏အားသာချက် ၁၀၀ အင်္ဂါ၏ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ရအခမဲ့အသုံးျပဳအားလုံးေဆိုဒ်၊နေရာသစ်အစည်းအဝေးနှင့်အသိအကျွမ်း၏သင်တန်းသားများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအရပ်ကိုယူ။ ယနေ့နှင့်အတူ၊၏အကူအညီစာနာဝန်ဆောင်မှု၊သင်ရနိုင်၏ဓါတ္ပံုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြု၊ပင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်။အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုယခု။.
ေGrodno။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် Grodno။
သူငယ္ခ်င္းသစ္ရွာေသာ Grodno သို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ။ တက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။ ကြပြန်ညွှန်းဖို့အချိန်ဆိုက်သင်ဆောင်တစ်ခုတည်းသောအပြုသဘောရလဒ်တွေ။ ကံကောင်းပါစေရှာတွေ့ဒုတိယတစ်ဝက်။ Grodno တစ်မြို့ဖြစ်ၼရုစ္၊အအုပ်ချုပ်ရေး၏ဗဟို Grodno Oblast နှင့် Grodno ခရိုင်။ ထိုမြို့တွင်တည်ရှိပြီးအနောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်း၏ဒေသတွင်းဘဏ်များအပေါ်အ Nemunas မြစ်အနီးတွင်နယ်စပ်နှင့်အတူလစ်သူယေးနှင့်ပိုလန်။ ခံစားသင့်အချိန်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သင်ပြီးသားသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ။ မလာကြလျှင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားပြီးသေး၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်ယခုပြု။ သို့သော်သင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်တစ်နေရာရာနီး။
လျှင်သင်ဆဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊ထို့နောက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုအမှန်တကယ်အခွင့်အလမ်းမှဖြည့်ဆည်းမိန်းကလေး၊ဆယ်ကျော်သက်များ၊အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးသာမွ၊ဒါပေမယ့်လည်းပြည်ပမှအခမဲ့။ ယနေ့အချိန်တွင်၊နှင့်အတူချိန်းတွေ့၏အကူအညီအထူးပြုအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသည်တစ်မျှမျှတတဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်း၊ပြီးတော့တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထိုက်တန်တဲ့လူကြိုက်များမှုတို့တွင်ခေတ်လူတွေအတွက်တိုးတက်မှုများအားလုံးအတွက်အကြိမ်ကြိမ်အသက်တာ၏။ ပထမဦးဆုံး၊ဤရွေးချယ်မှု၏ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ဘဝလက်တွဲဖော်ခေတ်မီဖြစ်ပါသည်၊အဆင်ပြေပြေနဲ့လူကြိုက်အခြားရွေးချယ်စရာအပေါ်ချိန်းတွေ့ဖို့အလမ္း။ ဒုတိယအ၊ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့အကွင်းအဘို့အသွင်အစည်းအဝေးရာအရပ်ကိုယူနိုင်ပါသည်နီးပါးကဲ့သို့အမှန်တကယ်ရက်စွဲမှကျေးဇူးတင်စကားကိုဗီဒီယိုချက်တင်။ သဘောတူစေဖို့အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်လိုအပ်သည်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ရေး၊ဒီအအလွန်အသုံးဝင်သည်မျက်နှာချင်းဆက်သွယ်ရေး၊အထူးသဖြင့်လျှင်၊သင့်ရဲ့နာတိုက်ရိုက်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၊ဒါမှမဟုတ်ပင်အခြားပြည်နယ်၊အရာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ယင်းအစား၊အသွားအားဖြင့်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးမြန်ဆန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေနေစတင်ရန်အတွက်သူ၏ပျော်ရွှင်မှုကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ကိုထူးခြားသောကမ်းလှမ်းနှင့်ပြည့်စုံချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုတွေကိုလိုက်လိုအပ်ချက်များကို၏။ အကူအညီဖြင့်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊သင်လေ့လာသင်ယူအတူဆက်သွယ်ပြောဆိုမည်သို့အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဇြန္လဲ့ေနှင့်အခြားသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ကိုထူးခြားသောကမ်းလှမ်းနှင့်ပြည့်စုံချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုတွေကိုလိုက်လိုအပ်ချက်များကို၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ၊သငျသညျအသုံးပွုဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်အမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်၊ဖြစ်ဇြန္လဲ့ေနှင့်အခြားသူများ။
။ဒီနေရာမှာနှင့်ယခုအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအပေါ်စုံတွဲရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ Friesland။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ၊မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ထည့်ပါ။ ဤအဖြစ်အယောက်၏မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊သင်ကူညီလိမ့်မည်အသစ်ဖြစ်စေအသိအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ Polova-အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ဘယ်မှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာအခမဲ့။ သင်တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေအတွက် Friesland နှင့်အွန်လိုင်းချက်တင်၊ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုခေါ်သင်ဖုန်းပေါ်မှာ? ထိုအယူ၏အားသာချက် ၁၀၀ အင်္ဂါ၏ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ရအခမဲ့အသုံးျပဳအားလုံးေဆိုဒ်၊နေရာသစ်အစည်းအဝေးနှင့်အသိအကျွမ်း၏သင်တန်းသားများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအရပ်ကိုယူ။ ယနေ့နှင့်အတူ၊၏အကူအညီစာနာဝန်ဆောင်မှု၊သင်ရနိုင်၏ဓါတ္ပံုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြု၊ပင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်။ အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုယခု။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏ခေါင်းစဉ်ချိန်းတွေ့၊အြန္လိုင္းကစားတဲ့နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ ဒီမှာကအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုအပေါ်ခေါင်းစဉ်:ချက်တင်၊ချိန်းတွေ့၊ဆက်သွယ်ရေး၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာရော၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ချစ်ကြည်ရေး၊မိသားစု၊မင်္ဂလာဆောင်၊စတာတွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SPD သည် Martirosyan၊ဗိုလ်ချုပ်။ သူတို့သည်မ:ကို-ယူကရိန်းတွင်အကြောင်း-သန့်-ချီနှင့်ပတ်သက် Robosha။ Mauger Stati-၏ဧည့် NEA ရုပ်သံရုပ်သံလိုင်း NEA ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vlad-ယူကရိန်း Galina Yanchenkoကျွန်၊လူကိုမီခေးလ် Tsymbalyukအမိ။ သူတို့သည်မ:ကို-သီးသန့်အပေါ်မေ ၁၁ ပို့ခြင်းမရှိဘဲအမျိုးမျိုးအရာင္းမည့္ ၄:ဂရပ်ဖစ်။ဆက်သွယ်ရေး။ ဒီနေ့ကျနော်တို့အသွားအတုအလင်း၏စတုတ္ထနှစ်-ထားဒီဇိုင်နာများ၊မာလ်တီမီဒီယာညွှန်ကြားရေးမှူး၊အလင်းရောင်ဇိုင္နာ၊အနုပညာဒါရိုက်တာ၏အတိုင်ပင်ယို၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံုးႏိုင္သူမ်ားရုပ်သံချန်နယ်။ စကားပြော၏အလုပျသတ။ ယနေ့တွင်၊အားလုံးသင်၏ချစ်သူကို၊အလွန်ကြီးစွာသောရုရှားဘာသာစကား။ အများစုက၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂျာမန်အနုပညာသည်၊ဒါပေမယ့်အချို့သည်ထိုဘာသာစကား၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး။ နှင့်၊ကလေးပြန်ပေးဆွဲအယခင်အစိုးရအရာရှိနှင့်ယခုပိုင်ဆိုင်အသေးစားများ၏ကွင်းဆက်မင္း။ သူ၏ဇနီးအနားမှာကိုယ်တိုင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ အဆိုပါသူခိုးကိုရွေးနုတ်ဖိုး၊ဒါပေမယ့်လူကိုဘဲပန္သြားသည္။ နှင့် Kositsky သွားဖို့တိုက်ခန်းများ၏ပြန်ပေးဆွဲလူနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းသို့ကျဆင်းထောင်ချောက်။ သြင္းဤရုပ်သံလိုင်းမှ၊ကျွန်တော်အက်ဒီနှင့်ကျွန်တော်ခုနစ်နှစ်အရွယ်ပါ။ ငါရှိခဲ့ဖူးမည်သည့်မိတ်ဆွေများ၊သင်နောက်ဆုံးတော့တက်ပြသအဖြစ်တစ်ဦးရည်းစား၊သူမကကျွန်တော့ဘဝကိုငရဲ၊ဒါကြောင့်ယခုငါသည်မကျင့်ပင်စကားပြောဖို့ကျွန်မအမေ။ ဒီမှာငါ့ကျောင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်-ငါအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွေးနှင့်အတူထက်ပိုပြီးများအတွက် ၂၅ အနှစ်၊ကူညီသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေပိုကောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်အသီးအသီးအခြား။ ထက်ပိုပြီးများအတွက် ၇ နှစ်ပေါင်း၊ငါသည်သင်ပေးခြင်းအားငါ့ပညာအတတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်ဗီဒီယိုအပေါ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မဆက်ကပ်အပ်နှံကိုယ်ကိုသင်မျှဝေဖို့အတွေ့အကြုံအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းမာစတာအတန်းအပေါ်ရရန်မည်သို့အကောင်းဆုံးမိန်းကလေးများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ မာစတာအတန်းအႀပေါ်ဧပြီလ ၂၉ မှာ ၁၉:၀၀ CET၊ပြီးစီးမှုနှင့်အတူဒီမာစတာအတန်းအစား၊သင်တိုင်းအခွင့်အလမ်းဖြစ်လာဖို့ဘုရားသခင်၊Badu နှင့်အခြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုအပေါ်ဤအကြောင်းအရာ:ချက်တင်၊ချိန်းတွေ့၊စကားပြောခန်း၊ချစ်ခြင်း၊နှာ၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ချစ်ကြည်ရေး၊မိသားစု၊မင်္ဂလာဆောင်နှင့်တော့။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်သောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အတူအမျိုးသမီးဆရာမတက္ကဆက်ပြည်နယ်နှင့်ချက်တင်အတွက်စကားပြောအသိုင်းမရှိဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ တွေ့ဆုံပြီးဟောပြောဖို့အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်အာင္ဆန္းအန်တိုနီယိုနဲ့ကလုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်အသစ်များနှင့်ထိန်း။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိရှာတွေ့သောသူသည်လူများအသီးအသီးအခြားတွေ့ဆုံသီးအသီးအခြားနှင့်ဆက်ဆံရေးသို့ရ။ မှတ်ပုံတင်သင့်စာမျက်နှာကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးဆရာမတက္ကဆက်ပြည်နယ်နှင့်ချက်တင်ချက်တင်မရှိဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။
တစ်ခုတည်းသောအလေးအနက်နှင့်အခမဲ့အဘို့အချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်အတွက်အန္ဂို။ သင်သည်မကျင့်လျှင်လုံလောက်တဲ့သစ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျား၏မြို့တော်မှတူအန္ဂိုလာ၊ဖန်တီးအနေနဲ့ကြော်ငြာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အသိအကျွမ်းလာသင်။ ကံမကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အကဲဖြတ်၏အလုပ်အဖွဲ့မပါဘဲ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်မအန္ဂိုလာ၊ရွေးချယ်သင့်။ တစ်ခုတည်းသောအလေးအနက်နှင့်အခမဲ့အဘို့အချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်အတွက်အန္ဂို။ သင်သည်မကျင့်လျှင်လုံလောက်တဲ့သစ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျား၏မြို့တော်မှတူအန္ဂိုလာ၊ဖန်တီးအနေနဲ့ကြော်ငြာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အသိအကျွမ်းလာသင်။ ကံမကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အကဲဖြတ်၏အလုပ်အဖွဲ့မပါဘဲ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်မအန္ဂိုလာ၊ရွေးချယ်တဲ့အစည်းအဝေးတိုက်ရိုက်မြေပုံပေါ်တွင်သင့်ရဲ့မြို့သူမြို့သားနှင့်အတူ၊အမျိုးသမီးရဲ့လူအနီး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အဖုံးများအပေါင်းတို့သည်မြို့ကြီးများ၏ရုရှားနှင့် CIS။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာကေးရှင်း
ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကြောင့်၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အပေါင်းတို့သတင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲ။ လူတစ်ဦးချင်းစီသည်အစဉ်အမြဲအ ၊သောဆက်သွယ်ရေးပိုမိုလွယ်ကူပြီးရှာပိုပြီးသာယာ။ အတူထိတွေ့ရမှကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့မှဗီဒီယိုနှင့်အတူစကားပြော၏ကြီးမားအရေအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးမှကမ္ဘာကျော် အင်တာနက်ကို။ ကျေးဇူးတင်စကားဤဝန်ဆောင်မှု၊လူဖြစ်လာသစ္စာစောင့်သိအပေါင်းအဘော်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ထိုအချိန်ကာလရှိလာဆက်သွယ်ဖို့အပေါင်းတို့နှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်များ၏ခွန်အားသို့မဟုတ်အားနည်း၏။ အဓိကအရာစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ လည်း၊ရှက်လူမိန္းမချဉ်းကပ်တတ်သောမိန်းကလေးများအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသိရ။ သင်ရှိပါကအထက်ပါအင်္ဂါရပ်နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုအဆိုပါဗီဒီယိုချက်တင်"ကျပန်း"။ အသစ်ရယ်စရာ နိုင်၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊ဤတစ်ရယ်စရာပုဂ္ဂိုလ်၊ဤဆိုဒ်အနှော၏ကြီးမားသောအရေအသုံးပြုသူများ။ ငါတို့သည်လည်းသည်ဟုဆို၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောအတွက်ရုရှားတွင် ။ သင်ရိုးရှင်းစွာဆက်သွယ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရှာဖွေဘို့စကားပြောဆို။ စကားပြော၏။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက်အတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောသူတို့အတွက်ဘာသာစကားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှု။ နေစဉ်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးထောက်လှမ်းရေးမှတဆင့်သို့မဟုတ်ကျပန်းဖုန်းနံပါတ်များတတိယပါတီများကျေနပ်သာဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဒီေရြးခ်ယ္မႈကပိုပြီးအဆင်ပြေများအတွက် ။ သင်လုံးဝဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ခံစား သက်သာခံစားနေစဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့အနီးကိုစောင့်ကြည့်။ အစစ်အမှန်အကျိုးကိုသင်တန်းသားများ၏ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပ်အတွက်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးရိုးရှင်းပြီးချိန်းချက်အလက်များ၏ဖြစ်တဲ့"မိုနိုကျောင်းသားကျောင်းသူ"ဖြစ်နိုငျတဲ့စနစ်သို့မဟုတ်အချစ်၏နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ။ မရှိလျှင်ကျွမ်း၊ဥပမာအားဖြင့်၊ရန်သဘောတူ၊ထိုအခါသင်လုပ်သင့်တယ်မေ့လျော့။ အနာဂတ်၌၊သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိမရှိထွက်ရှာရန်သင်သိဖြစ်စေမ၊နှင့်ပြောပြဒီဇာတ်လမ်းကိုဆက်၏ကလေးများနှင့်မြေး။ မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်ရုရှားဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ကျပန်း။ လည်း၊သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဤမပွုနိုငျ၊င့်တစ်မိုက်နှင့်ကင်မရာနှင့်အတူ။ ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးသောဤစက်ကိရိယာ။ ဒီကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားနှင့်ထိတွေ့။ မမေ့မလြော့ပါသောလူများ၏အရေလိုအပ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကိုအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာ။ တစ်ဦးရှိပါတယ်ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေး နိုင်သူအဖြစ်ကမ္ဘာမှအသိအကျွမ်းတွေ၊မိတ်ဆွေတွေနဲ့တောင်ရယ်စရာကောင်းတဲ့အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်။ တိုင်းမိန်းကလေးရဲ့အိပ်မက်လက်ထပ်တဲ့သတ္တိ၊အဆင်းလှသောလူငယ်တစ်ဦးသည်လူ၏အသွင်တစ်မျိုးအောက်ကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာ။ အသုံးပြုသူများ အသုံးပြုသူများကစကားပြောကြားအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်နေရာတစ်နေရာ။
အဖြစ်နေထိုင်ရ၊သိတရုတ်နှင့်မိသားစုစတင်။ အဘို့ဒီနေ့ရဲ့လူငယ်လူ၊ဒီပြဿနာတစ်ခုမက။ ယခု၊အဘို့အများအပြားနှစ်ပေါင်းအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားရုရှားနှင့်တရုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းကျယ်ပြန့်။ အဆိုအရမကြာသေးစစ်တမ်းများ၊၇၅%ရုရှားအမျိုးသမီးများလက်ထပ်ကြတဲ့တရုတ်အမျိုးသမီး၊အတူစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝနှင့်ယုံကြည်ကြောင်းတရုတ်ယောက်ျားကောင်းတစ်ဦးထက်ရုရှ။ အမျိုးသားများအဘို့ဤတိုင်းပြည်တွင်၊တစ်မိသားစုမစတင်အတာဝန်ရှိသည်၊ဒါပေမယ့်ရှာဖွေတဲ့အဖော်ခက်ခဲသည်၊ရှိပါတယ် ၂၀ သန်းကိုပိုပြီးတရုတ်အမျိုးသားများထက်တရုတ်မိန်းကလေးများ။ ဤအချိုးမညီမျှမှုကြောင့်အကြောင်းမူဝါဒတည်ရှိတော်မူသည်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အဘို့အဆယ်စုနှစ်အတော်များများ:တမိသားစု၊ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ အဆိုအရတရုတ်အစဉ်အလာ၊အသားကြောင်းသေချာပါစေအသက်ကြီးမိဘများကအဘယ်သူမျှမပင်စင်စနစ်၊ဒါကြောင့်အမွေးအသားအလွန်ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်သောစိတ်။ ခဲ့လျှင်သင်မွေးဖွားဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦး၊ကိုယ်ဝန်မပြီးပြတ်သေး။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို၏ဤပညတ်တရားကိုနေဆဲပြဿနာအတွက်တရုတ်အမျိုးသားများအတွက်၊ဒါကြောင့်အရေအတွက်၏တရုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဥရောပနှင့်ရုရှားအမျိုးသမီးကြီးထွားလာသည်။ အဆိုပါတရုတ်တစ်ဦးတမူထူးခြားတဲ့လူတွေ။ အမျိုးသားများအစဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ သူတို့နားလည်တဲ့အနာဂတ်အတွက်အရှင့်ကိုအ၊ဒါကြောင့်ငါကြိုးစားသင်ယူဖို့အကြောင်းအများကြီးလုပ်အကိုင်။ သူတို့သတိထားပြီးမပြစစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်မှာပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး၊ဒါပေမယ့်တန်ဖိုးမိန်းကလေးအဖြစ်အပြစ်အတွက်အခန်းကဏ္ဍ၏ဇနီးနှင့်မိခင်၏အနာဂတ်ကလေးများ။ သင်တို့အဘို့အက၊ဆက်ဆံရေးစတင်လမ်းမှလက်ထပ်။ အစဉ်အလာအပေါ်အမြင်ချင်းမိသားစု၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဖြစ်သင့်လွှမ်းမိုး၊ဤသည်အရေးအပါဆုံးစကားလုံးသည်လူအဘို့အ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလုပ်မနိုင်၊ဒါပေမယ့်အိမ်အတွက်ဖြစ်သင့်သည်။ အထူးအာရုံစိုက်ဖို့ပေးရသည်သားသမီး၊သင်များအတွက်အကောင်းဆုံး။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်၊မိဘများကိုဂုဏ်တင်လေးစားမှုနှင့်သူတို့စကားလုံး-အထူးသဖြင့်မိသားစုအတွက်။ ေကိုယ်စားလှယ်များဒီလူ၊မိသားစုအရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းအသက်တာ၏။ သင်၏မယားနှင့်သားသမီးများမှာအစဉ်အမြဲကာကွယ်၊သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းကြာတရားအားလုံး၊သင့်မိသားစုဝန်းကျင်ဖြင့်သင်တို့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်အာရုံစိုက်။ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးလိုအပ်သစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဘို့အချိန်းတွေ့။ ယခင်က၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်အဖြစ်လက်ထပ်ဖို့သာ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်မိဘများမူကား၊ယနေ့တရုတ်မိမိမိတ်ဖက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမှတဆင့်သို့မဟုတ်အကူအညီဖြင့်အင်တာနက်၏။ ရည်မှန်းချက်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက် တရုတ်ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများ-အတွက်တစ်ဦးမိသားစုစတင်။ သူတို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်အနက်၊ရိုးရိုးသားသားပြောကြောင်းသူတို့၏နောက်ခံနှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း၊နှင့်မျှော်လင့်အတူကြည်မှသူတို့ရဲ့ကလောင်အဖော်။ ရှေးခေတ်ကကတည်းကအတိုင်းမြို့တော်ခဲ့လုပ္နည္း-စျေးကွက်ဘယ်မှာလုပ်ရောင်းချခဲ့သည်။ ရှန်ဟိုင်းအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ဒါကြောင့်နေဆဲတက်ကြွယနေ့အပေါ်စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေ။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြော်ငြာများပေါ်တွင်တင်ထားသောအဆိုပါကောက်ခံသောသူတို့၏အကြောင်းကိုစတင်ချင်။ ရှိပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်များထောင်ရေးအေဂျင်စီများ၊အရာသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်လိုချင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ င္အျညွှန်ပြရမယ်သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်၊အမြင့်၊ဒီပလိုမာ၊တုိက္ခန္း၊သို့မဟုတ်ကားတစ်။ အခြားတောင်းဆိုချက်အပေါ်။ ထိုဓာတ်ပုံကိုမထုတ်၊ဒါပေမယ့်သာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အေဂျင်သင်တို့နေရာတွင်တည်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ဒါကြောင့်အမဓလေ့ထုံးတမ်းဖြည့်ဆည်းဖို့လမ်းပေါ်မှာ။ ဒါဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ထောင်နိုင်ရန်အလုပ်မှာ။ ကြီးစွာသောအခွင့်အသစ်ကိုတနှစ်အဘို့၊သောဓလေ့ထုံးတမ်းသွားရောက်ရန်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာလူအများအပြား။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းသင်ယူဖို့အပေါ်စနစ်တကျထောင်ရေးခရီးစဉ်အတွက် Khabarovsk၊Vladivostok။ သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တွေ့တွက်အားလပ်ရက်အပေါ်။ အဓိကမြို့ကြီးများ၏ရုရှား၊စုံတွဲဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာတရုတ်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ပြပွဲများဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၊ရိုးရာလက်ဖက်ရည်ပွဲအခမ်းအစာပေးစာများ၏တူညီသောအကျိုးစီးပွားကိုအွန်လိုင်း။ မိန်းကလေးများအတွက်အရေးကြီးအခံနိုင်ရည်မိတ်ဖက်၊ရရှိနိုင်အိမ်ခြံမြေတစ်ဦးအထင်အဆင်း၊ဒါပေမယ့်အပေါင်းတို့အဘို့အရက်စွဲများအဖြစ်အခြေခံစာနာပြီးအသီးအသီးအခြား။ ရေးသားသူများအတွက်တာဝန်ရှိဖင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အစဉ်အမြဲအကူအညီသင်တို့မှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပေးပြီးလက်တွေ့ကျအကြံဉာဏ်များရှာဖွေခြင်းအပေါ်အလားအလာမိတ်ဖက်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းသူတို့ကို-သင်သုံးနိုင်သည်ပစ္စည်းများ၏ဒီဆိုက်ကိုသင်ရပါလျှင်သတ်မှတ်အနေနဲ့တက်ကြွကြွချိတ်ဆက်။ အားလုံးရုပ်တုဆင်းတုအပေါ်ဆိုက်ဆိုင်၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်။
အမြင့် ၁၇၅။ အလေးချိန် ၇၇ ကီလိုဂရမ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိဳင္ကားအဖြစ်၊အသက်ပျိုသည်အလုပ်များနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာမာင္း၊ပျင်းစရာမဟုတ်ပါ၊နှင့်အစဉ်အမြဲတွေ့တစ်ခုခု၏အသက္ကိုမိမိနှင့်မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊အရာရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊နီးပါးဖြေဆိုရန်၊မ vindictive၊မေတ္တာရှင်ပြုကောင်း၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများအကြောင်းပြော Chur အဘို့အလူကောင်းမထိုက်။ လူတစ်ဦး၏ဒေသအမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ပို၊ဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။ သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်ပါလိမ့္မည္။ ဒီနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းမှလူလိမ့္မည္အခမဲ့ပါဘဲ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးနောက်၊အရာသာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ၊သင်သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလူအတွက်အခြားမြို့။ လူတိုင်းတွင်၊ရှာဖွေမေတ္တာပြန်လာသောအခြားတစ်ဝက်၊အိမ္ေထာင္က်လိမ့္မည္၊ပျော်စရာရက်စွဲများ။
ကျနော်တစ်ရွှင်လန်းသော၊ပျြောရှငျသော၊အကောင်းမြင်၊ပိဳင္ကား၊အခမဲ့လူတစ်ဦးနှင့်ဟာသတစ်ခုဥာဏ်ကောင်းသောနှင့်အဘယ်သူမျှမမကောင်းတဲ့အကျင့်။ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ရယ်စရာ၊အခမဲ့၊သွယ်သောမိန်းမတွေ့လိမ့်မည်မေတ္တာ၌၊သဟဇာတနှင့်ပွဲတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပတဲ့ဘဝအတူတူ။ မင်္ဂလာပါ။ သင်ထိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူလူတို့တွင်ဟို။ ဒီနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်း၏ကိုယ်ရေယောက်ျား၏မြို့ကနေအ Santa ဟို။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးနောက်၊အရာသာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ၊သင်ရလိမ့်မည်ဖို့လက်လှမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအမျိုးသားနှင့်ကလေးများ၌နေထိုင်သောအခြားမြို့။ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊မေတ္တာကိုရှာတွေ့၊သူတို့အခြားဝက်ပြန်လက်ထပ်သို့မဟုတ်လက်ထပ်၏မြို့အတွက် Santa၊အောင်မြင်သောဆက်သွယ်ရေး။
Volgograd ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေ၊အပင်ရှာတွေ့ငါတို့ဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ထို့ကြောင့်သူသည်အသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊များစွာသောလူလွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ကျွမ်းရနေ့စဉ်အသက်တာ၌၊ဒါကြောင့်အများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလူ၊ထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး၏ချက်တင်ကစားတဲ့မတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊အရာစိတ်ဝင်စားစရာနည်းလမ်းမသာတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှစိုးရိမ်နှင့်၎င်းတို့၏ခံစားချက်၊ဒါပေမယ့်လည်းကူညီရှာဖွေအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နိုင်ဖြစ်ရိုးရှင်း:မျက်နှာပြင်နှင့်ကီးဘုတ်၊ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်သိအတိအကျဘာကိုသင့်ရဲ့ Interlocutor နဲ့တူလှပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသည့်အခါချိန်းတွေ့၊ကြောင့်မှတ်မိမကြာခဏဘယ်လိုသင်အမှားတွေလုပ်တဲ့အခါလူအတင်အခြားလူများရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်သံလမ်းအပေါ်စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်သိသိသာသာ။ အခြားလူများ။ ဗီဒီယိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူတစ်-ဖော်ရွေအသုံးျ၏လူတို့အဘို့မည်သည့်အသက်အရွယ်ကျော်၏အသက် ၁၈။ ပေါ်တယ်ရှိပါတယ်ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုလစဉ်သူအတွက်အသုံးပြုကြသည်အတွက်နှစ်မျိုးလုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။ သို့သော်၊အများဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သင်လိုအပ်အဘို့အမိတ်ဖက်နှင့်အဖော်၊သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသူတွေးမိပါလိမ့်မယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊ဤအချိန်။ စကားပြောလိမ့်မည်အများဆုံးစျေးသိပ်အဆင်ပြေလမ်းအတွက်သင်ဆက်သွယ်ဖို့၊နှင့်ဤအခြေခံအကျဆုံးနှင့်အရေးကြီးအားသာချက်။ ကြောင်းမထင်ကြဗီဒီယိုချက်တင်အရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်ဝဘ်၊အဆန့်ကျင်တွင်၊လူများစွာမွေးဖွားပေးပါရန်ရိုးရှင်းပြီးအသိအကျွမ်းများ၊မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအပေါ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ၊အနုပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၊ချိန်းတွေ့အကြုံအတွက်၊ရှာတွေ့ခရီးသြားမ်ားတူညီသောအကျိုးစီးပွား၊နှင့်တော့။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို၏ရင်ခုန်စရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဖယ်ကျဉ်မထားပေ၊တယောက်ရာခိုင်နှုန်း၏သောသူစုံတွဲများ၏ခိုင်ခံ့သောမိသားစု၊ကျွမ်းအင်တာနက်ပေါ်မှာ။
၂၄-ဒီဗြီဒီယိုချက်တင်အတွက်လူနှစ်ဦး။ အခြားသောစကားအတွက်၊နှစ်ဦးသာ၏အသုံးပြုသူများဝန်ဆောင်မှုကိုအသီးအသီးအခြား။ ပိုပြီးအတိအကျ၊ဒီဆက်သွယ်မှသာနှစ်ဦးအကြားကိရိယာ၊တက်ဘလက်များ၊စမတ်ဖုန်းများ၊အသုံးပြု။ အရာထွက်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးများ၏ရှေ့မှောက်၌အတည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်၊မည်သည့်လူအရေအတွက်-ကိုဘယ်လိုအပြားရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်း၏၊ဤကိစ်စတှငျ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ချက်တင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သို့မဟုတ်အရာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှကွဲပြားခြားနား၊သင်စုစည်းနိုင်လာခံ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မမေ့မလြော့ရပါမည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအထူးဒီဇိုင်းအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ရင်းနှီးသောဆက်သွယ်ရေး။ နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစား၊အကောင်းဆုံးတယ်၊ဒါမှမဟုတ်အစား၊လက်ခံပုံစံဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်အနှစ်။ စကားအနည်းငယ်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြော-ဗီဒီယိုအတွက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ သမ်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သွားဖို့အဓိကအစာမျက်နှာ၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ။ သင်ရှိပါကသန်စွမ်းကမ်၊သင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပေါ်လာပါလိမ့်မည်၊မဟုတ်ရင်မျှမရှိဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအခြားသင်တန်းသားများ။ အရာအားလုံးဖြစ်ရမည်တရားမျှတသော:သင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သူတို့သည်ကြည့်ရှုရပါမည်။ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှာတွေ့မှသာလူများအတွက်အထက်ညာဘက်ထောင့်။ လျှင်သင်အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ၊ထို့နောက် ၂၄ သင်သာတူဆက်သွယ်ပြောဆိုသောသူတို့အားအသုံးပြုသူများအနေမျိုးထိုင်နေကြတယ်တိုက်ရိုက်ရှေ့တွင်ကမ်၊ဒါပေမယ့်မပို့ဖို့ မြို့ရိုးအ၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ကိုနှိပ်ပြီးနောက်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သာကျပန်းရှာဖွေမှုအတွက်အသုံးပြုသူနှင့်အဆက်အသွယ်။ သင်တို့ကိုအလျှင်းအခြားလူတစ်ဦးမေးဖို့ခွင့်ပြုချက်အဘို့အအောင်၊အနာဂတ်မှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာလူများစွာနှင့်အတူကပူးတွဲကစားတဲ့အချိန်တိုအတွင်း။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးသင်အဆက်အသွယ်ရှိသည်၊အပိုပြီးဖွယ်ရှိသင်တွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်သိမှရချင်၊ပိုကောင်း။ ၂၄ ကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်များအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ရှိ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ချက်ချင်းပြောဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်နားလည်ဖို့ရှိမရှိဆက်လက်ဆက်သွယ်သူတို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်မ။ ဤအချိန်ကာလအတွင်း၊သင်ပိုမိုသတင်းအချက်တင်အတွက်လူနှစ်ဦးထက်အနည်းငယ်အတွက်လအတွက်မည်သည့်စာပေးစာမှလူမှုရေးကွန်ရက်။ အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြော။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချက်တင်၊ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဂ်ပန္ႏ။ ေ၂၄၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အပြည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ ဒီအတွက်ချက်တင်ကစားတဲ့အတွက်လူနှစ်ဦး၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါနိုင်ငံအားလုံးခလုတ်ကိုထိပ်။ ညာဘက်တွင်။ ပေါ်လာသည့်စာရင်းထဲတွင်၊တိုင်းပြည်အတွက်စိတ်ဝင်စားကြ၊ဥပမာအားဖြင့်၊ဂျာမဏီ။ ယခုတွင်သင်သည်ဗီဒီယိုချက်တင်-အကစားတဲ့နှစ်၊သို့လှည့်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူဂျာမန်ဘာသာစကား။ စကားမစပ်မိန်းကလေးများမှရုရှား၊ယူကရိန်း၊ရုစ္သိသင့်သောအဖို့သူမဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ချက်တင်ကစားတဲ့နှစ်၊အများအပြားယောက်ျားပြည်ပမှမျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလတ်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များတို့တွင်အလှဆုံး။ ဒါကြောင့်အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူကူညီနိုင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်သိသိသာသာသင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲ? လက်လွတ်မမူဒီအခွင့်အလမ်း။ အပြင်ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ရှာဖွေအသစ်အသိအကျွမ်း၊ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်နှစ်ဦးကိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးနိုင်သည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။ အဘို့အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနိုင်ငံခြားသားအတွက်စိတ်ဝင်စားသောသူသင္ယူရုရှ။ သင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုသူ့ကိုနှင့်အတူရုရှားဘာသာစကားနဲ့သူဆွဲသင်ဗမာထဲတြင္ဂ်ာမန္၊ျပင္သစ္၊စသည်တို့ကို။။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊၂၄ မသာအဘို့အဖျော်ဖြေနှစ်ဦးအက္ခရာများ၊ဒါပေမယ့်လည်းကိရိယာတခုနှင့်အတူစေနိုငျသောအလွန်ကြီးစွာသောလက်တွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ အသုံးပြုရန် သူ။ သူတို့ကမကြာသေးတွေ့ဆုံနှစ်အတွက် ၁၈ အပေါင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ ထန်ကျွှန်တော်သို့အသီးအသီးအခြားအလျင်အမြန်နှင့်အလုံလောက်တဲ့မရနိုငျ။ ဖို့ကြိုးစားတိုင်းနှမြောဘဲအခိုက်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား၊သော်လည်းသင်၌အသက်ရှင်သောကွဲပြားခြားနားသောမြို့နှင့်ချီမပါဘဲမိုင်အကွာ။ ကမ်ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ ထောက်အကူပြုကြောင်းအထီးကျန်ဆန်စိတ်နှလုံးကိုရှာဖွေသီးအသီးအခြားပေမယ့်အကွာအဝေးနှင့်အကွာအဝေး။ ချက်တင်အတွက်နှစ်ဦးသည်တစ်မူထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုပေးသည်သောအခွင့်အလမ်းကိုမှလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ ဒါဟာကိုယ့်အဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ်အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးပို့ဖို့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့:သင်ရေးသားအမည္အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ဒါကြောင့်ချက်ချင်းအပေါ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်။ ဤသည်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုသင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ထိုင်ဖို့အတွက်အရေးမက်ဆေ့ခ်ျများကျပန်းနှင့်အတူလူသူအံ့သြသွားလိမ့်မည်နှင့်စတင်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဆက်တိုက်သို့မဟုတ်နှင်ထုတ်အပေါ်လျစ်လျူရှုစာရင်း။ နောက်တဖန်အ၊သင်စွန့်ခွာထွက်စံတင်းပလိတ်များနှင့်ပျင်းစရာစကားပြောဆိုချက်တွေကိုများမှာဆိုးရွားရွားပျင်းစရာအပေါ်လူမှုမီဒီယာ။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ပြီးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းရန်လျှောက်လွှာအတည်ပြု။ ရုံပေါ်တွင်နှိပ်ပါစတင်စကားပြောခလုတ်ကိုရှာပါ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့စက္ကန့်အနည်းငယ်။ လျှင်သင်မဲ့အထီးကျန်ခံစားရ၊ဒုက္ခကိုရှာဖွေတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်၊သို့မဟုတ်ချင်ကြပါဘူးချက်တင်နှင့်အတူသငျသညျပေးနိုငျ၊သင်ကြိုးစားသင့်အွန်လိုင်းချက်တင်။ အမြဲရှိပါတယ်လူသည်ဤချက်တင်၊အချို့တို့ကိုပင်မသိကြပါသောသူသင်ဖို့ပြောနေတာ။ ဒါကအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်။ မကြာသေးမီက၊ထိုကဲ့သို့သောချက်တင်၍အတော်လေးမကြာခဏကွာရှင်း။ ပထမဦးဆုံးနှင့်အများဆုံးနာမည်ကြီး၏၊သူတို့ကိုငါထင်-Shatrule။ ဒီလိုဗီဒီယိုချတ်၊နိုင်ဆက်သွယ်အဲမပါဘဲ။ သင်စက်တစ်ကျပန်းစကားပြောမိတ်ဖက်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သူတို့အတိုင်းလိုက်နာရုံသူတို့ကိုရေးသားဖို့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊စက္ကန့်ပစ်မှသင်အခြားလူတစ်ဦး။ ေနာက္ခံဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာရန်သာခွင့်ပြုထားပုံနှိပ်အက္ခရာများ၊ဒါပေမယ့်လည်းဆွဲ။ အဖြစ်ပရိသတ်အတွက်၊ဒါဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်၊ဒါကြောင့်အပြည့်အဝဒီဝန်ဆောင်မှုကိုသုံး၊သင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အနည်းငယ်အသိပညာဗမာ။ လမ်းဖြင့်၊သင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လက္ပတ္နာနှင့်အတူ၊အဓိကအားရုရှားစကားပြော။ ငါ့ထံသို့စကားပြော-တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြီးနောက်၊သင်ပြုလိုအပ်သမျှသည်အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါလင့်ကိုနှိပ်ပါအပေါ်ခလုတ်၊နှင့်အသင်ခံရလိမ့်မည်တွင်။ ဘာမှအပိုပဲ။ ထိုအချိန်မှာဒီအရေးအသား၊၁၁၁ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများ။ အခြေခံအားဖြင့်အလွန်ဆင်တူသည်ယခင်တဦးတည်းအတွက်ကလွဲပြီးအရောင်စုံဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုစိတ်ကြိုက်။ အခါသွားတယ်၊အဲဒီထက်ပိုခဲ့ကြ ၃ ထောင်အသုံးပြုသူများ။ နောက်ဆုံးတွင်-၂၄ နာရီနေ့က။ အမည်မသိနှင့်အတူစကားပြောဖို့စွမ်းရည်ကိုရွေးချယ်ပါ interlocutors အားဖြင့်ကျားမနှင့်အသက်အရွယ်။ ရှိပါတယ်;အချို့သောရယ်စရာပြည်ထောင်စု၌နေသောသင်တို့၏စိတ်ဓါတ်များ။ မှတ်ပုံတင်ရန်၊သင်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်အပြောင်နှင့်ရွေးချယ်တော်မူသောသင်တို့ထံသို့စကားပြောလို။ နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စတင်စကားပြော၊သင်ဆဲမှတ်ပုံတင်။ ဆိုက်-အားလုံးဗီဒီယိုချက်တင်ဥပမာအားဖြင့်:အခြားရွေးချယ်စရာ၊အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊စသည်တို့ကို။၊ ဖန်တီးများအတွက်လွယ်ကူသောနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးများအပြားကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အစည်းအဝေးများအတွက်စုံတွဲများ။ ဒါကြောင့်သာအနည်းငယ်ရဲစွမ်းသတ္တိစတဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောနဲ့ကိုသက်ဝင်ကမ်-ဤအရပ်၌သင်ဖို့အဆင်သင့်ဆက်သွယ်တစ်ယောက်နှင့်အတူတစ်ဦးကလူစိမ်း။ သင် အဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားရန်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကမ်။ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုအလွန်ရိုးရှင်းသော။ ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်နှစ်ဦးပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်သင်တို့အဘို့အအသုံးပွုနိုငျချိန်းတွေ့နှင့်လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်အတွက်ကျပန်းစိမ်းသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်။ ဒါပေမယ့်သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်အဘို့ထဲကရှာတွေ့၊ကျနော်တို့သေချာသင်သည်ရှက်ကြောက်မည်မဟုတ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်တွင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ဗီဒီယိုချက်တင်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောတွေ့အကြုံဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊သင်မည်သို့မရှိဘဲဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတူသူအခြားလူများဆောင်ခဲ့မည်ခံစားချက်များ၊စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်သင်အချို့သောလုပ်ရပ်နှင့်ဖန်တီးယုံကြည်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊သငျသညျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြီးမားသောအရေအချက်တင်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်။ ဒါပေမယ့်ဒီအသက်ရှင်သောချက်တင်ကအများကြီးအကျိုးစီးပွား။ အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်ဗီဒီယိုချတ်ပြုလုပ်သည်။ ဒီနေရာမှာတိကျတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ::သင်ချင်စေခြင်းငှါအဘယ်အရာကိုမြင်နေတာအတွက်ကနေဒါ၊ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ပြင်သစ်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဂျာမနီ၊သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ။ အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်။ တိပေးလိမ့်မည်ဟု ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုရောက်၏လုံလောက်သောအရေအသုံးပြုသူများအဘယ်သူကိုနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအမည်ကိုထည့်သွင်းအမျိုးမျိုး၏အသက်တာမှ။ သင်သိသင့်သောအလက်များကိုခြေရာခံပါဘူးသို့မဟုတ်စံချိန်ပတ်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏၊အခြားဗီဒီယိုချက်တင်။ အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အပိုင်း၊ကျွန်တော်အာမခံချက်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ၏ကိုယ်စားအခြားဗီဒီယိုချက်တင်။ သင်ဖိတ်ခေါ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အံ့သြဖွယ်နှင့်အပြုသဘောလူလိုသောကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဖို့အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်။ လူသစ်တွေ့ဆုံရန်နှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? ဤကိုဖတ်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်စာသားနှိပ်ပါစတင်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သင်၏အိမ်နီးချင်းအတွက် stairwell။ သင်ပြောဆိုရန်လိုအပ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်သင်ကြောက်လန့်သို့မဟုတ်ရှက်ထိုသို့ပြုမှ။ စကားပြောဖြင့်ဝှက်၊ပြောနိုင်သူတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်သူတို့ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောသည်။ သို့မဟုတ်သူ၏misbehaving၊သင်သည်မပြုလျှင်၊သင်တို့သည်အပြစ်တရားဥပေဒအရေ။ ခင်ဗျားဟာကျောင်းသားကျောင်းမှာအ။ သို့မဟုတ်သင့်ကလေးတွေကိုကျောင်းသို့သွား။ သင်လိုအပ်စေဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသောဆရာအဖြစ်တစ်ခုခုလုပ်နေတာအရေးကြီးပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ဒါကြောင့်ဆရာမသိသူအမည္ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကြောင်းကျောင်းသားလိုင်ကောက်ခံအခွန်ကနေအတန်း။ အဆိုပါမိဘများ၏ဒီ brat ဖြစ်ကြောင်းလုံလောက်သောနှင့်အပြစ်ဆည်းေ။ ဆရာမများနှင့်မိတ်ဆွေဖန်ဆင်းတော်မူပြီသင်နှင့်သင်ပြောပြနိုင်သူတစ်ဦးအတိအကျရေးထားဆိုပါတယ္။ အားဖြင့်အမည်မသိစကားပြောခန်း၊သင်ထုတ်လွှင့်သတင်းအချက်အလက်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးမပါဘဲတတ်နိုင်သမျှအကျိုးဆက်။ သင်သည်အသင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်မှာ။ ပြီရှိမရှိကိုသင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အပေါ်မှာရရှိနိုင်စမတ္ဖုန္းတက်ဘလက်ကွန်ပျူတာဖန်တီး၊အမည်မသိစကားပြောပေးပို့ဖိတ်ကနေတဆင့်အလင့်ခ်ကနေတဆင့်။ ဆွဲထားများအတွက်အခမဲ့၊အဘယ်သူမျှမ Usernames သို့မဟုတ်စကားဝှက်။ သင်လိုအပ်အသွယ်လူတစ်ဦးဖုန်းဖြင့်။ သင့်ရဲ့စက်ကိရိယာရှိသည်ပါဘူးတစ်ကဒ်နှင့်အသုံးမပြုနိုင်၊သို့မဟုတ်ပဳႏိုင္မယ္။
ဗီဒီယိုချက်တင်ချက်တင်ကစားတဲ့ရုပ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၏တရုတ်နေထိုင်သူများအလိုရှိသောခံရဖို့အစဉ်အမြဲနှင့်နေရာတိုင်းအတွက်အသင်း အုပ်စုကြီးတစ်စု။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထီးကျန်လယ်ဘုရင်နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာကဖို့ဓလေ့ထုံးတမ်းများအပြားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအလုပ်မှာ၊မိသားစုအတွက်စက်ဝိုင်း၊အနီးတွင်အဘယ်မှာသင့်အိမ်တည်ရှိပြီး၊လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များနှင့်အတူလူငယ်တရုတ်။ လာအတူအလုပ်လုပ်ရန်တူညီသောကြိမ်နှုန်းအဖြစ်သူတို့လာဖို့အလုပ်လုပ်။ ဒီမှာတွေ့ရတာနိုင်သလား။ ကောင်းစွာ၊ဟုတ်ပါတယ်။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှအထားကိုချိန်ညှိမွန္ကန္စြာေပၚေနူးဖွင့်လှစ်ရဲ့ထိပ်မှာချက်တင်စာမျက်နှာ။ ကိုကလစ်နှိပ်ပါအားလုံးနိုင်ငံများ၊တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်စာရင်း၊အကြှနျုပျတို့သညျတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ သင်စတင်ခင်မှာစကားပြောနှင့်အတူတရုတ်လူမျိုး၏ဤလောကအတွက်ကစားတဲ့၊သတိရ၏အချို့ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များ၏ခေတ်သစ်တရုတ်။: ၁။ ဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတရုတ်ဘာသာစကားသည်အဓိကမှာ။ တစ်ခုချင်းစီဇာတ်ကောင်သည်ထူးခြားသော၊၉၉ ကိစ္စများမဟုတ်ပါနှင့်အတူအခြားဇာတ်ကောင်ပုံရိပ်တစ်ခုသောအဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘဲ။ Hieroglyphs ကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်၊နှင့်ရှင်းလင်းစွာသိ။ တရားရုံး၏ကန္ဂ်ီဝဏ္ဏ၊အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအသီးအသီးတခြားသာ။ တရုတ်တယောက်တည်းရှိပါတယ်၊ငါးတန်ချိန်၊ကြားနေသူတယောက်နှင့်လေး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊ပင်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ၊သူတို့အညီသံဆိုလိုနိုင်ပါအထိ ၁၂၀-၁၇၀။ တောင်တရုတ်များမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးကြောင်း၊ဒါကြောင့်သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားတူညီသောအရာအကြိမ်ပေါင်းများစွာသာစကားအထိအတိအကျအခြားလူတစ်ဦးကိုသင်နားလည်။ ဆက်သွယ်သည့်အခါအခြားဘာသာစကား၊ဒီအလုပ္အမ်ိဳးအစား-စကားထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်။ ၂။ ၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားတရုတ်သို့မျက်နှာအားလုံးတွင်အခြေအနေ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ရင်ထွက်ရှိပြီးထက်သော။ ပညာတတ်တရုတ်လူမျိုးများနှင့်ချစ်သောသူတို့အားအခြားလူတစ်ဦးကိုအမြဲပြုံး။ လူတိုင်းသည်အခြားအခစျြလိမျ့မညျ။ သင်ကထွက်စစ်ဆေးချင်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါဗီဒီယိုချက်တင်။ ၃။ တရုတ်လူမျိုးများမှာအလွန်အချိန်မှန်၊ဒါပေမယ့်သင်ကြိုက်လျှင်သင်လူများ၊ထို့နောက်အလာကိုေချက်တင်ငါးမိနစ်။ ၄။ တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကကြီးစိုးနေတဲ့လျှို့ဝှက် matriarchy။ ဒါကြောင့်အံ့ဩခြင်းမရှိကြသောလူငယ်တစ်ဦးကိုတရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်စကားပြောလူအတော်များများ။ မိန်းကလေးများအဘို့၊ဤအပြုအမူအရာအပါယာထက်ပိုပြီးဘာမှမမှားတစ်ခုခု: ရှိစဉ်အခါအဘယ်သူမျှမတွင်တရုတ်အမျိုးသမီး၊ဤတစ်ဖြစ်ပါသည်အခမဲ့ရှာနှင့်ပင်ဖြစ်ပျက်အများအပြားယောက်ျားတွေမှာတစ်ချိန်က။ ၅။ ချက်တင်ကစားတဲ့တရုတ္ပြသနိုင်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးပိုပြီးတိကျမှန်ကန်၊တည်ပြုသင်သည်သင်၏ပြီးပြည့်စုံမရှိခြင်း။ တရုတ်မှချည်ထားသောကြသည်မဟုတ်။ အများစုကအဝတ်အထည်အတွက်နိုင်ငံပိုင်အမျိုးအစားများညွှတ်။ အဟောင်းတွေလူမျိုးဝတ်ဆင်နိုင်သည့်အရာကိုပင်လူငယ္ေလး။ အဆင့်အတန်းများအလှအဖြစ်စဉ်းစားသည်အဖြူအသားစတိုင်နှင့်အပြုအမူများ၏ပြည့်စုံလွတ်လပ်ခွင့်:အများပြည်သူအတွက်တရုတ်မှခွင့်ပြုအပ္တ့ဲ၊ချောင်းဆိုးနှင့်မြည်း။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအနေနဲ့လဲလှယ်၏အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပေါ့ပေါ့တန်တန်စကားပြောဆို။ သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပျင်း။ ဆိုပါကယခင်လူမပါဘူးသင်အထင်နှင့်အသင်နှင့်အတူဆက်ပြီးနောက်၊ဖျော်ဖြေ။ ဆက်သွယ်ရေးကြားလူအဖြစ်ပိုပေါ့အွန်လိုင်း၊တစ်ဦးရည်မှန်းချက်အဖြစ်မှန်။ နှင့်ကစားတဲ့ ၂၄ နာရီချက်တင်သင်သုံးနိုင်သည်နောက်ထပ်နာမည်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင် ၂၄သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးကိရိယာမြှင့်တင်မှာရည်ရွယ်တဲ့ဒီအဖြစ်မှန်။ ဆိုကြကုန်အံ့ပိုပြီးအကြောင်းကိုဒီကနေကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ။
ချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ဖရန်စစ္စကိုကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုအတူ၊များစွာသောအခြားချိန်းတွေ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၊ရှည်လျားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ ငါအများကြီးကြားဖူးတယ်ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအကြောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းရှာဖွေကူညီပေးတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊သို့သော်ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းခဲ့သည်ထက်ပို ၅၈၊ဘယ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အဖော်လိုက်ဖက်ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဖရန်စစ္စကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုကူညီလိမ့်မယ်သင်ဖန်တီးတကယ့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအများဆုံးအမြတ်အစွန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပြသလိုက်ဖက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီလျှောက်ထား၊နှင့်ကြောင့်ထိုသို့ယူသင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆန်ဖရန်လာမည့်အဆင့်အပေါင်းတို့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပေါ်များမှာ။ ရှာတွေ့သောလူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းပျော်ရွှင်စေမယ်လို့။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်ပြောသမျှကိုသင်ချင်တယ်အထူးသဖြင့်လျှင်၊လူတွေကအဆက်မပြတ်တောင်းဆိုနေတာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ။ ဒါေပမယ့္မင့္ကေ။။။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့၊ထိုအခါအထီးကျန်သင့်ဝန်။ ကျနော်တို့တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေ။ ဤအဖြေမှန်သည်။ ဆက်ဆံရာတွင်များ၏ပြဿနာနှင့်အထီးကျန်အတွက်ခေတ်မီလူနေမှုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်ထက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမီ၊သို့သော်၊အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏အဘိုးအဘွားများနှင့်ပင်မိဘများရှေ့တွင်ရပ်နေ၏တီဗီကိုစောင့်ကြည့်တနေ့လုံး။ သူတို့ပါတီအစည်းအဝေး၊ခရီးမှထိုအရပ်မှ။ ရှိများစွာသောအခွင့်အလမ်းမှဖြည့်ဆည်းသင့်ရဲ့အိပ်မက်။ လက်ရှိမျိုးဆက်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီအာရုံထဲမှာ။ နေထိုင်သူအများစုကမြင့်အဆောက်အအုံနှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်းကိုမမြင်စဖူး။ ရှိပါတယ်ဘယ်နေရာသွား၊အဘယ်သူမျှမသင့်လျော်သောလျှောက်ထား။ သင်ချင်တယ်၊ပြောဖို့သွား။ မစိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီ။ ဆိုရင်အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးမားပြီးကျယ်လောင်သော၊သင်ပင်မယ့်စီမံခန့်ခွဲရန်ရှာတွေ့သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်။ဒါပေမယ့်အနေနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်။သူ အစွမ်းထက်သည်နှင့်အကြီးအသိတွေအများကြီးလျှင်မအရာအားလုံးကို။ တွင်နီးပါးအနည်းငယ်မိနစ်၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဖရန်စစ္စကိုချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့အဘို့သင်တို့အဘို့အ။ မိနစ်အနည်းငယ်ယူပြီးသင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူတစ်အများအပြားစံမ်ားပေါ်သည်ထင်ရှား။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရေးသားခဲ့သည်၊ငါအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ၊တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဂိုး-အိမ်ထောင်၊သားသမီး၊တစ်စုံတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုတူလူဘုံအကျိုးစီးပွား၊ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အဖျြောဖွရေး။ အပြားအတွက်စစ်တမ်းများ၊ဤသူတစ်ဦးဖြစ်လိုမယ်လို့အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သူရှာဖွေရေးအသက်အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်သဏ္ဌာန်၊မျက်နှာဆံပင်အရောင်၊ပုံ၊နှင့်အခြားပါရာမီတာ။ တွေအများကြီးဖတ်စံမ်ား၊ခွဲခြားသတ်မှတ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတစ်ဦးသင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အစာပေးစာယူ။ အချို့လူများကတူရှည်လျားစာပေးစာ။ ထို့ကြောင့်လူတစ်ဦးဖြစ်လာနီးကပ်ခင်လာမည့်အစည်းအဝေး။ သူမ်ားေနေ့စွဲအပေါ်သွားသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ တစ်စုံတစ်ဦးကမှတဆင့်သွားကြဖို့အလယ်အလတ်အဆင့်ကနေသွင်ပေးမှအမှန်တကယ်ပြန်လည်ဆုံဆည်း-ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းဖြင့်။ မ fantasize အကြောင်းအောင်မြင်တဲ့အတွက်ရှာသင်၏အခြားတစ်ဝက် သုံးချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ နေရာတိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်ည့်အဝင်အများအပြားလိမ်လည်။ ဒါဟာမှန်ပါတယ်ကြောင်းပြောရန်သင်ဒီမှာထက်ပိုပြီးအခြားအရပ်တွင်။ သို့သော်၊ဤတစ်အကြောင်းပြချက်စွန့်ခွာဖို့ဒီစိတ်ကူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးညီတဲ့လူ။ သင်ကံကောင်းနေလျှင်၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အချစ်တဦးတည်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်များအတွက်သင့်ရဲ့အထောက်အပံ့နှင့်အကူအညီအတွက်အရာအားလုံး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကောင်း။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမကြာခဏဖြစ်ပျက်။ ဟုတ်ကဲ့။ တစ်အများအပြားယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့ကြပြီအချစ်မှာ။ သင်နေထိုင်နေခဲ့ကြနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွအပြုစုပျိုးထောင်။။။။။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မကြာခဏ၊အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊တစ်ဦးအချစ်တဦးတည်း။ ဒီမပါဘဲအတွေ့အကြုံနှင့်ကျရှုံး။ ဒါပေမယ့်သင်ရှာတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးတည်းသာ၊သင်ချက်ချင်းနားလည်အရာအားလုံးအချည်းနှီးမဟုတ်ခဲ့။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အလွန်အရေးကြီးအခုအချိန်မှာအားလုံးချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။.
အမျူအဖွဲ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာ၊နှင့်အပြုသဘောအတွေ့အကြုံအတွက်မျူ။ ငါတို့သည်သင်တို့ပေးသွားမှာပါအမြင့်ဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောင်တိုင်းအသုံးပြုသူခံစားနိုင်မျူဒါအတွက်သူတို့၏အားလပ်ချိန်။ ကျေးဇူးပြုပြီးလေးစားအခြားအသုံးပြုသူများလိုက်နာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်များအဘို့အကာကွယ်ဖံုးေ။ အားလုံးအသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံသောဆာဗာနှင့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တတိယပါတီများနှင့်အတူမျှဝေ။ အခြားအသုံးပြုသူများအတွက်သာသုံးစွဲရန်အကြောင်းအချက်အလက်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုသင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ဖို့။ သတိပြုမိဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သင်ယူစကားပြောဆိုချက်တွေကိုအတွက်မျူဒါအတွက်။ သင္၏တည္ေနရာကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်။
ချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်အော်အင်တာနက်ကနေတဆင့်အတူ၊များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၊ရှည်လျားဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ ငါအများကြီးကြားဖူးတယ်ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအကြောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းရှာဖွေကူညီပေးတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊သို့သော်ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် အတွက် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းခဲ့သည်ထက်ပို ၅၈၊ဘယ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အဖော်လိုက်ဖက်ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်မှာအော်သင်ကူညီလိမ့်မည်ဖန်တီးတကယ့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအများဆုံးအမြတ်အစွန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပြသလိုက်ဖက်မွတ္ေလူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လာသောသူအသွယ်အတွက်သူတို့နှင့်အတူ၊ဤသို့ယူလိမ့်မည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက်အော်သစ်တစ်ခုကိုအဆင့်အပေါင်းတို့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပေါ်များမှာ။ ခက်တွေ့ဖို့တစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်ပြောသမျှကိုသင်ချင်တယ်အထူးသဖြင့်လျှင်၊လူတွေကအဆက်မပြတ်တောင်းဆိုနေတာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ။ ဒါေပမယ့္မင့္ကေ။။။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့၊ထိုအခါအထီးကျန်သင့်ဝန်။ ကျနော်တို့တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သည်။ ဆက်ဆံရာတွင်များ၏ပြဿနာနှင့်အထီးကျန်အတွက်ခေတ်မီလူနေမှုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်ထက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမီ၊သို့သော်၊အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏အဘိုးအဘွားများနှင့်ပင်မိဘများရှေ့တွင်ရပ်နေ၏တီဗီကိုစောင့်ကြည့်တနေ့လုံး။ သူတို့ ပွဲတွေစီစဉ်ပါတီအစည်းအဝေး၊ခရီးမှထိုအရပ်မှ။ ရှိများစွာသောအခွင့်အလမ်းမှဖြည့်ဆည်းသင့်ရဲ့အိပ်မက်။ လက်ရှိမျိုးဆက်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီအာရုံထဲမှာ။ နေထိုင်သူအများစုကမြင့်အဆောက်အအုံနှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်းကိုမမြင်စဖူး။ ရှိပါတယ်ဘယ်နေရာသွား၊အဘယ်သူမျှမသင့်လျော်သောလျှောက်ထား။ သင်ချင်တယ်၊ပြောဖို့သွား။ မစိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီ။ ဆိုရင်အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ဆူညံ၊ဒါကြောင့်လည်းအရမ်းမရှာတွေ့မှတတ်နိုင်သမျှသင်သည်သင်၏ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်။ ဒါပေမယ့်အနေနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်။ သူအစွမ်းထက်သည်နှင့်ကြီးတွေ၊အသိတွေအများကြီးလျှင်မအရာအားလုံးကို။ တွင်နီးပါးအနည်းငယ်မိနစ်၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတွင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အခမဲ့အဘို့။ ဒါဟာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ၊သင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူတစ်အများအပြားစံမ်ားပေါ်သည်ထင်ရှား။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရေးသားခဲ့သည်၊ငါအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ၊တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဂိုး-အိမ်ထောင်၊သားသမီး၊တစ်စုံတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုတူလူဘုံအကျိုးစီးပွား၊ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အဖျြောဖွရေး။ အပြားအတွက်စစ်တမ်းများ၊ဤသူတစ်ဦးဖြစ်လိုမယ်လို့အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ရှိနေသောလူများအတွက်ရှာဖွေနေအသက်အရွယ်၊ပုံသဏ္ဍာန် ခန်ဓာ၊မျက်နှာဆံပင်အရောင်၊ပုံ၊နှင့်အခြားပါရာမီတာ။ တွေအများကြီးဖတ်စံမ်ား၊ခွဲခြားသတ်မှတ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတစ်ဦးသင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အစာပေးစာယူ။ အချို့လူများကတူရှည်လျားစာပေးစာ။ ထို့ကြောင့်လူတစ်ဦးဖြစ်လာနီးကပ်ခင်လာမည့်အစည်းအဝေး။ သူမ်ားေနေ့စွဲအပေါ်သွားသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ တစ်စုံတစ်ဦးကမှတဆင့်သွားကြဖို့အလယ်အလတ်အဆင့်ကနေသွင်ပေးမှအမှန်တကယ်ပြန်လည်ဆုံဆည်း-ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းဖြင့်။ မ fantasize ကမြင်စွာရှာဖွေသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်ကိုအသုံးပြုချိန်းတွေ့။ နေရာတိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်အတွက်အော်၊အပါအဝင်အများအပြားလိမ်လည်။ ဒါဟာမှန်ပါတယ်ကြောင်းပြောရန်သင်ဒီမှာထက်ပိုပြီးအခြားအရပ်တွင်။ သို့သော်၊ဤတစ်အကြောင်းပြချက်စွန့်ခွာဖို့ဒီစိတ်ကူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးညီတဲ့လူ။ သင်ကံကောင်းနေလျှင်၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အချစ်တဦးတည်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်များအတွက်သင့်ရဲ့အထောက်အပံ့နှင့်အကူအညီအတွက်အရာအားလုံး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကောင်း။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမကြာခဏဖြစ်ပျက်။ ဟုတ်ကဲ့။ တစ်အများအပြားယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့ကြပြီအချစ်မှာ။ သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်အတူတကွနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ သင်အတွက်စေ့စပ်ပြုစုပျိုးထောင်။။။။။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မကြာခဏ၊အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊တစ်ဦးအချစ်တဦးတည်း။ ဒီမပါဘဲအတွေ့အကြုံနှင့်ကျရှုံး။ ဒါပေမယ့်သင်ရှာတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးတည်းသာ၊သင်ချက်ချင်းနားလည်အရာအားလုံးအချည်းနှီးမဟုတ်ခဲ့။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အလွန်အရေး၊ယခုဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအဘို့အတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။
મફત વિડિઓ ચેટ પુરુષો સાથે. લાઈવ વિડિઓ ચેટ
ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဓါတ္ပံုချိန်းတွေ့ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ ကြော်ငြာတွေချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ ၁၈ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် အကောင်းဆုံးချက်တင်ကစားတဲ့ ငါလိုအ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဒီယိုစကားပြောခန်း ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း
© 2021 ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!